सञ्चारिका समूहको अध्यक्षमा नितु पण्डित सर्वसम्मत | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सञ्चारिका समूहको अध्यक्षमा नितु पण्डित सर्वसम्मत
भदौ ३१, २०७५ आइतबार १९:३८:३५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं - सञ्चारिका समूहको अध्यक्षमा नितु पण्डित सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार भएको सातौं महाधिवेशन तथा २२ औं साधारण सभाले पण्डितको अध्यक्षतामा ३ वर्षका लागि १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा कमला पन्थी, महासचिवमा विमला तुम्खेवा, सचिवमा यशोदा अधिकारी, कोषाध्यक्षमा सीमा शर्मा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ ।
यस्तै सदस्यहरुमा कृति भट्टराई, पवित्रा सुनार, रुवी रौनियार, उर्वसी बस्न्यात, दुर्गा कार्की, बसन्ती बास्तोला, कविता थापा र सञ्चिता घिमिरे सर्वसम्मत चयन हुनभएको छ ।
सञ्चारिका समूह पत्रकार महिलाको हक हितका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ । अध्यक्षसहित अन्य सदस्यहरु सर्वसम्मत चयन भएको यो पहिलो पटक हो । त्यसैगरी समितिको नयाँ कार्य समिति पहिलो पटक समावेशी भएको छ ।
सञ्चारिका समूहको सातौं महाधिवेशन र २२ औंं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा चार जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिएको छ । सञ्चारिकाले यस वर्षको ‘सञ्चारिका समानता पुरस्कार २०७४’ पत्रकार सन्त गाहा मगरलाई प्रदान गरेको छ ।
सञ्चारिकाले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको यो पुरस्कार मगरले हिमाल खबर पत्रिकामा लेखेका समाज नै संवेदनाहीन फिचरको लागि दिइएको हो । यो पुरस्कारको राशि १५ हजार रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी समूहले २०७४ सालको स्व. उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ अछाम जिल्लाबाट पत्रकारिता गर्दै आएकी पत्रकार गीता कुँवरलाई प्रदान गरेको छ । पत्रकार कुँवर अछामबाट अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकाको लागि रिपोर्टिङ गर्छिन् ।
यो पुरस्कार स्व. पत्रकार उमा सिंहको नाममा स्थापना गरिएको र महिला पत्रकारलाई पेशामा थप उत्साह बढाउनका लागि २०६६ सालमा स्थापना भएको थियो । यो पुरस्कारको राशि ७ हजार एक सय ११ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै सञ्चारिका प्रोत्साहन पुरस्कार २०७४ देशसञ्चार अनलाइनमा कार्यरत वर्षा शाह र कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार शिल्पा कर्णलाई प्रदान गरिएको छ । छोटो अवधिमा सक्रिय भई पत्रकारिता गर्ने पत्रकार महिलालाई पेशामा थप उत्साह बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०६२ सालमा सञ्चारिका प्रोत्साहन पुरस्कार स्थापना गरिएको हो ।